Serivisy sy mpamatsy Fotona4Dpro tsara indrindra | Hongyu
Ny rafitra laser an'ny Fotona's SP dia natao hanatanterahana ireo fitsaboana estetika rehetra. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny halavan'ny laser roa miaraka amin'ny laser Fotona SP dia miasa ho toy ny rafitra be mpampiasa sy be mpampiasa izay afaka manatanteraka fampiharana be dia be amin'ny hatsarana, fandidiana ary ny gynecology. Fotona's Nd: ny halavan'ny halavan'ny YAG dia mahomby amin'ny fanatontosana ny sosona lalina indrindra amin'ny hoditra, raha ny halavan'ny halavan'ny Er: YAG kosa dia mety amin'ny famonoana ireo tsy fahalavorariana ambonimbony hanehoana vokatra mahaliana sy maharitra.
Fitsaboana ara-pitsaboana avo lenta indrindra
Fenitra volamena an'i Fotona Nd: YAG Ny teknolojia laser dia manome ny hery sy ny fahombiazana ilaina amin'ny fikirakirana fampiharana estetika maro karazana, manomboka amin'ny fanavaozana ny hoditra sy ny fihenan'ny volo ka hatramin'ny mony, ny fitsaboana vaskola ary maro hafa. Ny Nd: YAG laser amin'ny tsipika SP dia manohana ny hafainganam-pandehan'i Fotona L-Runner Pro SY S-11 Nd: Scanner YAG ho an'ny haingam-pandeha farany, fiarovana ary fahombiazan'ny fitsaboana amin'ny faritra midadasika. Ambonin'izany, ny maody Fotona PIANO vaovao mahery vaika revolisionera dia mamela hiditra lalina Nd: fanamafisana be ny YAG ary mitazona ny epidermis ho azo antoka sy mahazo aina.
Ny tsipika SP dia mamoaka ny herin'ny taranaka faha-3 ihany koa Er: YAG mipoitra indray ny hoditry ny laser, miaraka amin'ny fanaraha-maso mazava tsara, micron layer-by-layer. Miaraka amin'ny fiasa miainga amin'ny ambongadiny ka hatrany amin'ny peel lalina, manomboka amin'ny tsy ablative ka hatramin'ny ablative tanteraka ary manomboka amin'ny full field ka hatramin'ny resurfacing dia azo ampifanarahana amin'ny aretin-koditra manokana ny fitsaboana mba hahazoana vokatra miavaka. Vahaolana misy patanty toa ny teknolojia VSP (Variable Square Pulse) sy ny endrika Fotona SMOOTH farany endri-javatra vitsivitsy monja amin'ireo toetra mampiavaka ny tsipika SP ny fanapahana ny teknolojia laser Er: YAG.
Mode QCW ho an'ny fampiharana fandidiana
Ho fanampin'ny haitao avo infrared Er: YAG sy Nd: YAG, ny tsipika SP dia misy koa ny iray amin'ireo infrared mahery indrindra QCW (Quasi Continuous Wave) Nd: Laser mpandidy YAG eny an-tsena. * Efa ela ny mpandidy laser no misafidy laser infrared noho ny fahombiazany tsy manam-paharoa, ny fahaizan'ny famonoana otrikaina ary ny valim-pitsaboana miavaka. Miaraka amin'ny sanganasa fandidiana natao manokana an'i Fotona, ny tsipika SP dia manolotra toetra mampiavaka azy tsara sy fitambaran'ny halavan'ny halavan'ny infrared ho an'ny safidy fitsaboana isan-karazany.
Ny QCW Nd: ny halavan'ny onja YAG dia mety indrindra ho an'ny fampiasa amin'ny fandidiana, manomboka amin'ny fanapahana avo lenta sy ny fanilihana ny tavy ka hatrany amin'ny faran'ny endo, toa ny lipolisis tamin'ny laser, ny famonoana laser tsy azo ovaina ary maro hafa. Ny elanelam-potoana mifameno: Ny halavan'ny onja YAG dia manome alalana tanteraka amin'ny fandidiana, tsy misy dian-koditra na zaitra. Ny fitsaboana dia haingana kokoa ary tsy dia mampidi-doza noho ny teknika nentim-paharazana, ary ny fifandraisana misy eo amin'ny zotra SP sy ny preset fahatsiarovana namboarina dia hahatonga ny asan'ny mpandidy rehetra ho mora kokoa sy tsy dia mampaninona.
Fitaovana azo alaina ho an'ny aretim-behivavy
Ny laser Fotona's SP dia mpanakanto kintana amin'ny sehatry ny gynecology noho ny fahaizany voaporofo fa mahavita dingana tsy mifandraika, tsy manafika miaraka amina fampiononana bebe kokoa amin'ny marary, mampihena ny fotoana fohy ary fanasitranana haingana kokoa. ny Er: YAG laser tena ilaina amin'ny fitsaboana ny ratra amin'ny vozon'ny tranonjaza sy ny fivaviana, ary koa ny lesoka HPV, ny pigmentations ary ny neoplasias. Noho ny fahaizany mamono otrikaretina tokana dia azo ampiasaina amin'ny sela voan'ny aretina mihitsy aza. ny Nd: YAG Ny halavan'ny laser dia ampiasaina amin'ny fandidiana sela malemy, toy ny laparotomy, ny laparoscopic ary ny fitsaboana hysteroscopic, ary koa ny fomba fitsaboana gynecological cosmetic. Miaraka, ny halavan'ny laser amin'ny tsipika famenon-tsolika SP dia manome alalàn'ny fomba fitsaboana marobe, ao anatin'izany ny fomba fiasa vaovao tanteraka amin'ny fanasitranana ara-pahasalamana ny olana mahazatra indrindra ao amin'ny gynecological.
Namboarina ho mora ampiasaina
Hahafeno ny tonga lafatra amin'ny valim-pitsaboana ary ankafizinao ny hafainganam-pandeha sy fahombiazana tsy manam-paharoa: ny tsipika SP dia manasongadina interface tsara sy mora ampiasaina amin'ny presets fahatsiarovana namboarina mba hanampiana ny mpanao asa rehetra hiasa haingana sy mahomby kokoa. Ny sangan'asa namboarina ho matihanina, ny fomba fiasa mora voafantina ary ny endri-javatra mandroso maro hafa dia manatsara ny maha-izy azy sy ny fahombiazan'ny rafitra laser Fotona tsirairay ho an'ny fahombiazan'ny klinika sy ny fifehezana tsy manam-paharoa mandritra ny fitsaboana.
Modely roa azo isafidianana
SP Dynamis dia rafi-pahaizana miavaka sy feno asongadinana manolotra ny herin'ny haitao avo indrindra amin'ny indostria Er: YAG sy Nd: YAG lasers, natao ho an'ny fampiharana midadasika indrindra amin'ny estetika sy dermatolojia. Ny SP Dynamis dia misy koa ny fandidiana fanampiny QCW Nd: YAG laser ho an'ny fanafoanana ny laser, lipolisis, ary fomba fandidiana hafa.
SP Spectro - kinova SP kely kokoa sy tsy matanjaka kokoa noho ny SP Dynamis, ny SP Spectro dia manome ny teknolojia manara-penitra Er: YAG sy Nd: YAG laser (miaraka amina QCW Nd: YAG) amin'ny fandidiana tsy azo atao ao anaty mandroso sy mahavita be. fonosana izay natao hanomezana karazana fitsaboana estetika feno amin'ny vidiny tsy manam-paharoa.
* QCW dia fenitra amin'ny SP Dynamis ary tsy voatery miaraka amin'ny SP Spectro.
Teo aloha: thermage